अडियोबुकहरू। Reasons कारणहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् वर्तमान साहित्य
अडियोबुकहरू। Reasons कारण तिनीहरूलाई प्रयास दिनुहोस्
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | किताबहरु, डिजिटल विश्व
को अडियोबक्स उनीहरूको पुस्तक पसलमा छ। सानो, तर तिनीहरूसँग यो छ। शायद प्राय: सबै भन्दा क्लासिक शीर्षक संग, तर त्यहाँ धेरै नयाँ सुविधाहरू पनि छन्। यद्यपित्यहाँ के माग छ दृश्य वा पठन कठिनाइहरूको बिना नियमित पाठकको लागि? ¿बचत गर्नुहोस् हुनसक्छ समय त्यो पढ्न जुन हामीलाई नेत्रहीन ले अधिक लिन्छ? ¿क्याप्टन सबै हाम्रो ध्यान? के हामी दुबै कथामा "प्रवेश" गर्छौं र हामी यसलाई आफ्नो आँखाले पछ्याउँछौं? हामी विचार गर्ने छौँ मनसाय तिनीहरूलाई एक प्रयास दिन वा तिनीहरूलाई प्रयास गर्न, कम्तिमा।
केहि दिन अघि मैले यो कुरा सम्झें कथाहरू जुआन जोस प्लान द्वारा। डरलाग्दो साहित्यको क्लासिकको ती नाटकीय रेकर्डिले हामीलाई हाम्रो सबै ध्यान र कल्पनामा राख्यो। र बिहान को हप्तामा।
ठीक छ, एक अडियोबुक यस भन्दा बढि केहि छैन। नियमित शारीरिक सीडीमा लेखिएको कथाको ध्वनि रेकर्डि withको साथ पुस्तक, कलाकार र नाटक द्वारा पनि संगीत र ध्वनी प्रभावहरूको साथ। धेरै पाठकहरु लाई पनी याद छ क्यासेट कथाको जुन हामीले हाम्रो बाल्यकालमा सुनेका थियौं।
र, दूरीहरू बचाउदै, अवधारणा त्यो हो। केवल ढाँचा र प्लेब्याक मीडिया परिवर्तन भएको छ। तर बच्चाहरूको कथा जस्तो निलो दाह्री, जुन १ 15 मिनेट चलेको हुन सक्छ, अब हामी सँगै जान सक्छौं युद्ध र शान्ति वा Tormes को मार्गदर्शक, उदाहरणका लागि। हामीलाई पछाडि राख्न सक्ने प्रश्न भनेको त्यो रेकर्डि ofको गुणस्तर हो। र सबै भन्दा माथि, ध्यान अवधि। तर तिनीहरूसँग छैन। साथै, तपाईं तिनीहरूलाई को लागि इन्टरनेट वा जे पनि र तपाईं तिनीहरूलाई सजिलैसँग तपाईंको आफ्नोमा उपलब्ध छन् ट्याब्लेट वा मा मोबाइल.
तिनीहरूमा अलि बढी ध्यान दिन केही कारणहरू हेरौं।
1 तपाईं तिनीहरूलाई रेडियो जस्तै सुन्न सक्नुहुन्छ
2 आरामको त्यो मिनेट
3 धेरै हल्का यात्रा साथीहरू
4 मेरो सूचीमा यति धेरै पुस्तकहरू छन् र थोरै समय ...
5 अर्को भाषा सिक्न, सुधार गर्न वा अभ्यास गर्नका लागि आदर्श
6 त्यसोभए किन छैन?
तपाईं तिनीहरूलाई रेडियो जस्तै सुन्न सक्नुहुन्छ
जब तपाईं जानुहुन्छ काम, मेट्रोमा, बसमा... यद्यपि हामी आफूले छनौट गरेको कुरामा सावधान हुनुपर्दछ ताकि हामीले छोडेको धनी सपनामा नफर्कोस्।
तपाईं पनि तिनीहरूको कुरा सुन्न सक्नुहुन्छ घरको काम। हुनसक्छ एक राम्रोसँग भाँडा माझ्छ बुसकन क्युवेडो को। वा बोरिंग ट्रेडमिल मा जिम संग गति छान्नुहोस् असाधारण कथाहरू पो द्वारा। किन संगीत वा राजनीतिक बिहान भेलाहरू?
आरामको त्यो मिनेट
जब तपाईं काम पछि घर आउनुहुन्छ र चाहनुहुन्छ विच्छेदन गर्नुहोस्। त्यो रातको खाना पछि, असम्भव टिभी कार्यक्रमको साथ। हो, तपाइँ पूर्ण विच्छेदनको जोखिम चलाउनुहुन्छ। तर तपाईको हातमा भएको पुस्तकले त्यहाँ बढी खतरा छ कि तपाईले आफ्नो नाकमा कुद्नुहुनेछ। अडियोबुकको साथ, तपाईं ब्याट्री, ब्याट्री, अध्याय वा सम्पूर्ण पुस्तक चलाउन सक्नुहुनेछ। तर तपाईंको नाक ठाउँ मा रहनेछ।
धेरै हल्का यात्रा साथीहरू
फिजी वा लन्डनको लागि त्यो उडान। ओरिएन्ट एक्सप्रेस वा ट्रान्सकन्ट्याब्रिको। बालिक वा भोल्गा मार्फत त्यो क्रूज। तपाईंको मोबाइल र हेडफोनको साथ। र यो हो। हिट खेल्नु र सबैभन्दा रूसी आत्माको साथ कप्तानको छोरी अलेक्ज्याण्डर पुष्किन द्वारा।
मेरो सूचीमा यति धेरै पुस्तकहरू छन् र थोरै समय ...
तर हुन सक्छ उनीहरूलाई सुन्नको लागि त्यहाँ छ। त्यहाँ व्यक्तिहरू छन् जसले संगीत सुन्न र पढ्न जान सक्दछन् - मेरो लागि यो अकल्पनीय कुरा हो - तर प्रत्येक एक एक गरी छन्। तपाईंले भर्खरको समुद्री यात्राको आवाजमा ध्यान र त्यागको लागि त्यो संगीत परिवर्तन गर्नुपर्नेछ अचम्म कप्तान Aubrey को।
अर्को भाषा सिक्न, सुधार गर्न वा अभ्यास गर्नका लागि आदर्श
उदाहरण को लागी, को लागी शेक्सपियरको भाषा, तर तिनीहरू मोलिरे, गोएथे वा डन्टेको लागि समान हुन्। वा जे पनि। ती भयानक अभ्यास सुन्दै कि तिनीहरू कहिल्यै एकेडेमीमा अभ्यास गर्न सकिँदैन, क्यारियर, पाठ्यक्रम ... कुनै समस्या छैन। FCE, CAE, TOEIC, TOEF बाट अडियोहरू। OR रेभन पो द्वारा क्रिस्टोफर ली द्वारा आवाज उठाई।
त्यसोभए किन छैन?
एक अर्को तरिका साहित्यको नजिक जाने, किनकि तपाईंले यसलाई जहिले पनि राख्नुपर्दछ र जे पनि हो। केवल केही दृश्य कमजोरी भएकाहरूको लागि मात्र होईन, तर शारीरिक वा डिजिटल पुस्तक नहेर्ने लाजिस्टहरूको लागि।.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » अडियोबुकहरू। Reasons कारण तिनीहरूलाई प्रयास दिनुहोस्
लेखकहरूका लागि 'अनलाइन मार्केटिंग' के हो?
अभिनेता टोम ह्याks्क्स एक लेखक को रूपमा डेब्यू